निन्द्रा नपुग्दा के हुन्छ ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← दशैंमा घर जाँदा ठगिनुहोला है ! कति छ गाडीभाडा ? (सूचीसहित)
स्याङ्जाकी भूमिका गुरुङ मिस हङकङ नेपाल २०१६ →
दैनिक कति घन्टा सुत्ने भन्ने ’boutमा त्यस्तो कडा नियम छैन । उमेरअनुसार पनि शरीरले निन्द्रा माग गर्छ । बयस्कका लागि दैनिक सात–आठ घन्टा सुत्नुपर्छ । बालबालिकाका लागि त्यो भन्दा धेरै । तर वृद्धवृद्धा अलि थोरै समय सुत्छन् ।